BlackBerry na-ebupụta mmelite iji dozie Quadrooter na njedebe ya | Akụkọ akụrụngwa
Firmlọ ọrụ Canada BlackBerry were ogologo oge karịa ka ọ kwesịrị itinye isi ya na ụwa nke telephony na mgbe ọ mere, site na njedebe ndị dabeere na gam akporo, ọ na-esiri ike ịnweta òkè ahịa, ọkachasị n'ihi ọnụahịa nke ọdụ BlackBerry Priv elu ya. Dị ka ọ dị na mbụ, ndị Canada ewepụla ogologo oge ịghọta na ịmalite naanị njedebe dị elu na-ejedebe nhọrọ ha nke ịlaghachi isi ha na ụlọ ọrụ ụwa ma na afọ a ha na-ezube ịmalite oghere ọhụụ na etiti dị elu iji nwee ike iji mechaa si n'agbụrụ gị zaa gị ọdụ dị n'ahịa ahụ, ọkachasị Samsung, onye kacha ere ahịa ndị nrụpụta n'ụwa.
Mana mgbe ekwuputara ntinye aka ya na gam akporo, na onwa tupu ebido uzo mbu ya, ulo oru a kwuputara na ya gha enyere ndi oru nile nke ya aka ibido mmelite nke onwa iji dozie nsogbu nchekwa obula ndi oru gha ezute. N'ịbụ ndị na-ekwesị ntụkwasị obi na ọkwa a, ụlọ ọrụ ahụ na-ebupụta mmelite nche na naanị ọnụ ọnụ nwere BlackBerry Priv na ahịa, ọnụ na ugbu a natara mmelite na-edozi nsogbu nchekwa akpọ Quadrooter.
Quadrooter bụ nsogbu nchekwa na-emetụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 1.000 nde gam akporo ọnụ na iwekota a mgbawa nke ụlọ ọrụ. Nchedo nche a na-enye nsogbu anọ nwere ike ịbụ zoro ezo ka ngwa ọ bụla nwere ebumnuche ọjọọ nwere ike ibute ọdụ anyị. Na mmelite a, ụlọ ọrụ ahụ ejirila dozie atọ n'ime anọ ndị a, na-ahapụ ihe ngwọta maka nsogbu kachasị ọhụrụ maka mmelite Septemba. Ekwesiri icheta na belụsọ na ịchọrọ ịwụnye ngwa ọ bụla nke na-agafe na mkpanaka gị, ị nwere ike ịnọ jụụ kpamkpam maka nsogbu a. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnwale ụdị ngwa ọ bụla n'agbanyeghị agbanyeghị, o yikarịrị ka ruo mgbe onye nrụpụta ngwaọrụ gị doziri nsogbu ahụ, ị ​​ga-enwe nsogbu na njedebe gị nwere ike ibute malware, spyware ma ọ bụ ọbụna ransomware.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » BlackBerry na-ebupụta mmelite iji dozie Quadrooter na njedebe ya